Mofo gasy sy menakely ary ramanonaka
Accueil » Chronique » Mofo gasy sy menakely ary ramanonaka
Nihidy ny mpivarotra mofo gasy sy menakely ary ramanonaka, ny sabotsy sy alahady teo. Tsy «commerces essentiels», fivarotana miantoka aina, ve ny mpivarotra mofo gasy sy menakely ary ramanonaka anefa na manao vacances any Foulpointe aza ny Ambaniandro, mahavatra mifoha maraina manenjika mofo gasy sy menakely ary ramanonaka mafana?
Lafrantsa moa manambara tena ho firenen’ny Kolontsaina. Akory ary ny hagagana raha niditra «fihibo­hana» ry zareo tany tamin’ny martsa 2020 ka voarara tsy navela hisokatra ny Mpivaro-Boky. «Ajouter au confinement social l’isolement culturel», tovanana fahakambotiana ara-kolontsaina ny honjohonjo ara-piaraha-monina, hoy ny tarainan’ireo FivarotamBoky. Ny volana martsa 2021 vao neken’ny Ministeran’ny Vola sy Toe-Karena any Frantsa ny hisokafan’ny FivarotamBoky, raha miandry volana mey ny Tranom-bakoka, izay isan’ny mampalaza tokoa an’i Frantsa ka mahazaka mpizahantany avy amin’ny vazantany efatra. Isan’ny nahagaga iray hafa koa, dia tsy mba ny Ministeran’ny Kolontsaina no namaritra raha sakafom-panahy tena ilaina ny Boky, fa ny Ministeran’ny Fahasalamana sy ny Ministeran’ny Vola ary ny Toe-karena no tompon-teny.
Isika eto Madagasikara, indrisy, tsy manana Tranombakoka mampitolagaga sady tsy manana fahazarana hitaiza tena amin’ny Boky. Ny antsasaky ny Kianjan’ny Boky etsy Ambohijatovo, efa lasa fivarotana tsy misy ifandraisany amin’ny Boky ary ahiana mihitsy aza hanimba ny Boky: ny fataperan’ny mpahandro sakafo, ny menaky ny fivarotankanina, ny «court-circuit» an’ireo mpanao volo… Tsy nisy niraika teto amintsika izay momba ny Boky sy ny Kolontsaina tao anaty fihibohana: ka na tsy fihibohana aza, firy moa no mitsidika Fivarotam-Boky ? Ny Fivarotam-Boky nalaza fahiny aza (Librairie Mixte, Tout Pour l’École, Bibliomad, CMPLAntsahavola, Librairie de Madagascar) efa nandefitra lasa fivarotana tsy misy irain-jehy ho an’ny Kolontsaina (jereo Chronique de VANF: «Ne pas être l’homme d’un seul livre», 09.06.2018; «Parti-pris de lecture», 14.05.2019).
Tsy misy Ministeran’ny mofo gasy sy menakely ary ramanonaka moa hametraka fa fivarotana sady fiveloman’ny mpivarotra no hanina ho an’ny mpividy izy ireny. Asa ity lahatsoratra ity raha handalo ny mason’ireo mpivarotra mofo gasy sy menakely ary ramanonaka, mialoha ny hamonosany ny mofo anatin’ny gazety (raha tsy izany dia harona plastika). Fa sady fiangaviana azy, no fiangaviana ho azy, hisokatra sy hahazo alalana hisokatra, sabotsy sy alahady fihibohana.